Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Acura entsha Integra: IBold kunye neTurbo ihlawuliswe ngo-2023
I-Acura namhlanje inike ihlabathi ukujonga okokuqala kwi-Integra entsha elindelwe kakhulu, ebonisa ukubuya kwe-nameplate ebhiyozelwa kuluhlu lwe-Acura. Igqitywe ngokubetha ipeyinti ye-Indy Yellow Pearl ebolekwe kwi-NSX, i-Integra Prototype luphawu oluqinileyo loyilo lwangaphandle lwe-Acura Integra entsha ka-2023, eya kuxabisa malunga ne-30,000 yeedola xa ifika kubathengisi be-Acura kulo nyaka uzayo.
Iphefumlelwe yi-Integras yexesha elidlulileyo, kuquka neyokuqala eyanceda ukusungula uphawu lwe-Acura ngo-1986, i-Integra ka-2023 iya kuba yimodeli entsha yokusebenza kwesango kuluhlu lwe-Acura, i-premium compact yezemidlalo kunye noyilo olukhuphayo lweminyango emihlanu kunye nomoya omnandi wokuqhuba. . I-Integra yokuqala ngqa e-factory-turbocharged iya kuchulumancisa isizukulwana esitsha sabaqhubi abathandanayo abanesantya esithandathu esifumanekayo sothumelo lwezandla, ukutyibilika okuncinci okwahlukileyo kunye ne-injini ye-1.5-litre ephezulu, kunye ne-VTEC® kunjalo.
"I-Integra yenye yezona modeli zibalaseleyo kwimbali ye-Acura," utshilo uJon Ikeda, uSekela Mongameli kunye neGosa le-Acura Brand. "Le Integra intsha, iza kuqhubeka nokunikezela ngeyona ndawo ibalaseleyo yentengiso enqwenelekayo kodwa enokufikeleleka, nokusebenza ngokweemvakalelo kunye nesimbo, kudityaniswa nokuguquguquka kunye nokusebenza okufunwa ngabathengi banamhlanje."
Idizayinwe eJapan, isitayile sangaphandle se-Integra esitsha esinesibindi sinomgca othambekileyo wophahla kunye ne-liftback tailgate, esinika ubukho bendlela obahlukileyo obufana ne-coupe. Utoliko lwangoku lomgca we-Integra, imodeli yesizukulwana sesihlanu ibonisa iimpawu zophawu olufana negama le-Integra elikroliweyo phantsi kwesibane esisecaleni somqhubi kunye nesibane esisecaleni somkhweli.
Kuqala ukubonwa kuMfanekiso we-S, igrille entsha ye-Acura ye-Diamond Pentagon engenasiphelo inika umphambili we-Integra umlinganiswa onenjongo nomdlalo. Isiginitsha sokukhanyisa esikhethekileyo se-Acura sihlaziywa kunye ne "Chicane" izibane ze-LED zasemini ngoku ezibekwe ngaphezulu kwezibane ze-Integra's JewelEye® LED, zivelisa inkangeleko emangalisayo ngakumbi.
Iiarches zamavili angasemva anezihlunu kunye nefascia endlongondlongo engasemva enezigqibo zokuphuma kabini zigxininisa umkhondo obanzi we-Integra. Iphefumlelwe ziimodeli zangaphambili ze-Integra, isitayile sangasemva esahlukileyo sibonisa ububanzi, isiqwenga somsila esinye kunye nesiginitsha yokukhanya ehambelana ne "Chicane". Emva kwe-Integra Prototype's matte-finish 19-inch split-five wheels kukho iBrembo™ ezisebenza ngokugqithisileyo iziqhoboshi ezinezitshixo ze-Indy Yellow calipers ezinombala, zinika amandla amangalisayo okumisa kunye nenkangeleko endlongondlongo.
Ipeyinti ye-Integra Prototype ebetha i-Indy Yellow Pearl ihlawula imbeko kwiPhoenix Yellow, enikezelwa kwi-iconic 2000-2001 Integra Type R. I-high-gloss Berlina Black accents isetyenziswe kuphahla lwe-Integra, i-spoiler ye-decklid, i-mirror caps, i-diffuser yangasemva kunye ne-grille yangaphambili. . Umzobo osezantsi ubonisa ngesibindi igama le-Integra ngapha kwesithuthi.
Ukuqaliswa kwe-2023 Acura Integra kuya kuphawula okokuqala ukuba i-Integra yakhiwe eMelika, xa iqala ukuveliswa ngobuninzi kunyaka ozayo kwi-Marysville Auto Plant e-Ohio. Isetelwe ukwakhiwa kumgca wemveliso efanayo kunye ne-Acura TLX, i-Integra iya kujoyina zonke iimodeli ezintsha ze-Acura ezithengiswa e-US ekwakhiweni e-Ohio.
Iinkcukacha ezithe kratya kwi-2023 Acura Integra iya kukhutshwa ngokusondeleyo kwisingeniso sayo semarike kwisiqingatha sokuqala sonyaka ozayo.